Uphengululo lwe-ATFX 2020-kufuneka ufunde ngaphambi kokuvula iakhawunti
I-ATFX liphumelele ukubheja ukusasazeka kwehlabathi, i-forex, kunye nomthengisi weCFD ozinze eLondon.
Iakhawunti yeDemo yasimahla
Trading Platform I-MT4 (iwebhu, idesktop kunye neselfowuni)
Inani leeasethi 100
Iindidi zeeasethi iimali, iimveliso, izinyithi ezixabisekileyo, ii-indices kunye neesitokhwe
I-ATFX liphumelele ukubheja ukusasazeka kwehlabathi, i-forex, kunye nomthengisi weCFD ozinze eLondon. Inkampani ibonelela ngeqonga apho abasebenzisi abavela kwihlabathi liphela banokuthi bathengise kwaye benze imali kwimarike yezemali. I-ATFX ikwabonelela ngezixhobo ezongezelelweyo kubarhwebi ukubanika amandla okufumana iziphumo ezingcono kurhwebo lwabo. I-ATFX yaqalwa ngo-2017 kwaye ilawulwa liGunya lokuZiphatha kwezeMali (i-FCA). Iphethwe zii-AT Global Markets, inkampani ekwalilungu leNkqubo yeNkxaso-mali yeeNkonzo zezeMali. Ukongeza, inkampani isebenzisa imodeli yoNxibelelwano lwe-Elektroniki (i-ECN) isebenzisa ngokuthe ngqo ngokusebenzisa itekhnoloji yokulungisa.
Izibonelelo ze-ATFX kunye nezinto ezingalunganga
Inkampani ephumelele amabhaso ebonelela ngaphezulu kwe-asethi ye-200.
Iakhawunti yedemo yasimahla inikezelwa kubo bonke abathengisi.
Ukhuphiswano olusasazekayo oluqala kwii-0.6 iipips kwi-EUR / USD pair.
Uhlalutyo lwemihla ngemihla lwenziwa simahla.
Ikhalenda yezoqoqosho ebanzi yasimahla.
Iphakheji yemfundo ebanzi kubo bonke abathengisi.
Ukunyusa okuphezulu ukuya kuthi ga kwi-400: 1
I-ATFX ayiboneleli nge-ETFs kunye neebond njengoko abanye abantu benikela.
I-ATFX ayinaso isenzo sokurhoxisa isivumelwano.
I-ATFX ayiboneleli ngenqanaba lomkhenkce.
I-ATF ayinalo uphawu lokuhambisa ikopi
I-ATFX ibonelela ngaphezulu kwe-200 asethi kumaqonga ayo. Vula iimali, Inkampani ibonelela ngee-majors ezinje nge-EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, kunye ne-NZD / USD. Ikwabonelela ngeemali ezincinci ezinje nge-AUD / CAD, GBP / JPY, NZD / CAD, kunye ne-NZD / CHF. Inayo i-exotic efana ne-EUR / HUF, i-USD / MXN, kunye ne-USD / DKK phakathi kwabanye.
I-ATFX ikwanikezela Iimpahla njengeoyile ekrwada, igesi yendalo, kunye nombona. Inezinyithi ezixabisekileyo ezinjengegolide, iplatinam, ipalladium kunye nesilivere. Inkampani ikwanikezela indices njenge-Dow Jones Industrial Average, DAX, kunye ne-S & P 500. Ikwabonelela ngeemali zokukhokha ezifana neBitcoin, i-Ethereum, kunye neRipple. Okokugqibela, i-ATFX ibonelela ngezabelo ezinje ngeAmazon, iApple, kunye neGoogle.
Inkampani enikezela zonke ezi mveliso yinto elungileyo kuba ivumela ukwahluka. Ivumela abathengisi ukuba babe nenkululeko yokurhweba ngeeasethi abanomdla kuzo okanye abanobuchule kuzo.
Ubungakanani sisixa semali eyongezelelweyo esinikwa umrhwebi ukuba athengisane naye. Umzekelo, ukuba unayo i-100 yeedola kwaye ukhethe i-100: 1 yokuphakamisa, oko kuthetha ukuba ungarhweba nge- $ 10,000. Kwi-2018, emva kokuba i-European Union isayine umthetho i-MIFID, elona xabiso liphezulu lokufumana amandla kubathengi be-EU laba yi-30: 1.
Ngokuhambelana nale migaqo, i-ATFX ibonelela ngobungakanani be-30: 1 kubarhwebi baseYurophu. Owona mgangatho uphezulu wee-indices, izabelo, izinto zorhwebo, kunye ne-crypto ngama-20: 1, 5: 1, 20: 1, kunye no-2: 1 ngokwahlukeneyo. Kubathengi behlabathi, ubuninzi beemali, ii-indices, izabelo, izinto zorhwebo, kunye ne-crypto yi-400: 1, 100: 1, 20: 1, 400: 1, kunye ne-20 ngokwahlukeneyo. Itheyibhile engezantsi ibonisa ukuthelekiswa kwale mibutho.
Njengabarhwebi abaninzi, i-ATFX ayenzi mali ngokubiza ikhomishini kwintengiso. Endaweni yokuba inkampani yenze imali ngokusasazeka kwayo. Ukusasazeka ngumahluko phakathi kokubuza kunye nexabiso lentengo. Ishati engezantsi ibonisa ukusasazeka kwenkcitho yenkampani kwiiasethi zayo.
Uhlobo lwe-Akhawunti ye-ATFX
I-ATFX ibonelela abaxhasi bayo ngeendlela ezine zeakhawunti. Ezi akhawunti zilungiselelwe ngokufanelekileyo iintlobo ezahlukeneyo zabarhwebi. Ezi ntlobo zeakhawunti zezi:
Iakhawunti encinci - Ubuncinci bedipozithi kwiakhawunti encinci yi- $ £ 100. Elona xabiso liphezulu lifikelela kwi-30: 1 ngelixa ukusasazeka kuqala ukusuka kwi-1.0 pip.
Iakhawunti esemgangathweni-Ubuncinci bedipozithi kwiakhawunti esemgangathweni yi- $ £ 500. Elona xabiso liphezulu lifikelela kwi-30: 1 ngelixa lisasazeka liqala nge-1.0 pip.
I-akhawunti ye-Edge-Idipozithi encinci kwiakhawunti ye-Edge yi- $ £ 5,000. Elona xabiso liphezulu ngama-30: 1 ngelixa ukusasazeka kuqala nge-0.6 pip.
Iakhawunti yePremiyamu -Iakhawunti yepremiyamu ine-idiphozithi encinci ye- $ £ 10,000 kunye nomyinge wokufikelela kwi-30: 1. Le akhawunti ihlawulisa ikhomishini efikelela kwi- $ 25 nge-mio kwicala ngalinye.
Iakhawunti yobungcali- Le akhawunti inedipozithi encinci ye- $ £ 5,000. Inokuphakama okuphezulu kwe-400: 1. Ukusasazeka kuqala ukusuka kumbhobho oyi-0.6.
I-Edge, ipremiyamu, kunye neeakhawunti zobungcali zinee-perks ezongeziweyo ezinje ngomphathi weakhawunti yeprimiyamu, iseshoni nganye ye-Skype kunye noMlawuli oyiNtloko weNtengiso, kunye nezimemo kwimisitho ye-ATFX. Itheyibhile engezantsi ibonisa umahluko omkhulu phakathi kwezi ntlobo zeakhawunti.
Amaqonga orhwebo eATF
I-ATFX ibonelela abathengisi bayo kwiqonga leMetaTrader 4. I-MT4 ngamaqonga ezorhwebo aziwayo ehlabathini. Iqonga libonelela ngenani lezinto ezinje ngezikhombisi zesiko, ukurhweba okuzenzekelayo kunye nabacebisi ngeengcali, izixhobo zetshathi, kunye nokufikelela kwindawo yentengiso ye-MQL5. I-ATFX ikwabonelela nge-Android kunye ne-iOS inguqulelo yeMT4. Ikwabonelela ngoguqulelo lwewebhu lweMT4.
Ngokungafaniyo nabanye abathengisi, i-ATFX ayinalo iqonga layo lokuthengisa. Ukongeza, ayiboneleli ngeMetaTrader 5 kunye namanye amaqonga orhwebo lomntu wesithathu.
Isifundo: Ungabhalisa njani kwaye urhwebe nge-ATFX
Inkqubo yokubhalisa iakhawunti nge-ATFX ilula kakhulu. Ukuba uqala, sicebisa ukuba uqale ngokwenza iakhawunti yedemo. Kwiphepha lasekhaya, kuya kufuneka ulandele amakhonkco abonisiweyo ngombala obomvu apha ngezantsi.
Kule khonkco, uya kucelwa ukuba ufake iinkcukacha ezimbalwa ngawe. Eli ligama lakho kunye nelokugqibela, inombolo yefowuni, idilesi ye-imeyile, uhlobo lweakhawunti olukhethayo, imali yeakhawunti, kunye nemali ofuna ukuqala ngayo. Uya kunikwa ukufikelela kukhuphelo lweMT4.
Ukuba ungumrhwebi onamava, kuya kufuneka uye ngqo kwi uvule i-akhawunti ephilayo iphepha. Kweli phepha, uya kucelwa kuqala ukuba ukhethe ulwimi olukhethayo. Kuya kufuneka ufake iinkcukacha zakho, iinkcukacha zezemali, amava, ulwazi ngezemali, kunye nokuvuma njengoko kubonisiwe ngezantsi.
Emva kokuba ufake ezi nkcukacha, kuya kufuneka ungenise amaxwebhu akho njengekhadi lokuzazisa kunye nobungqina bokuhlala. Oku kufunwa ngumthetho. Isetyenziselwa ukuqinisekisa ukuba iinkampani zihlala zikwazi umthengi wakho (i-KYC) kunye nemithetho yokuchasana nemali (AML).
Emva koku, kufuneka ukhuphele i-MT4, wenze iakhawunti ye-MT4, ubeke imali kwiakhawunti yakho, uyihambise kwiMT4, emva koko uqale ukurhweba.
I-ATFX yinkampani elawulwa liGunya lokuZiphatha kwezeMali (i-FCA). Oku kuthetha ukuba inkampani kufuneka igcine umthetho. Uhlobo lokuqala lokuqinisekisa kukuqinisekiswa kwe-imeyile. Ukwenza oku ngokunqakraza kwikhonkco elithunyelwa kuwe kwakamsinya nje emva kokuba ubhalisile. Emva koku, kuyakufuneka ufake i-ID yakho okanye ipaspoti kunye nobungqina bokuhlala.
Iimali kunye nokuKhutshwa
Ukukhululeka kweedipozithi kunye notsalo kubaluleke kakhulu. Abathengi bafuna ukuziva bekhuselekile xa bethenga. Bafuna iidipozithi kunye notsalo ngokukhawuleza. I-ATFX ibonelela ngeendlela ezintathu eziphambili zokufakwa kwemali. Yamkela amakhadi etyala kunye namatyala, ii-e-wallets ezinje ngeSkrill, iNeteller, kunye neSafeCharge, kunye nedipozithi ngqo yebhanki.
Intengiselwano yamakhadi etyala kunye nedebhithi kunye ne-e-wallets zithatha ngaphantsi kwemizuzu engama-30 ukubonakalisa kwiakhawunti yakho. Ukutshintshwa kweebhanki kuhlala kuthatha ixesha elide kodwa oku kuxhomekeke kwibhanki nakwilizwe lemvelaphi.
Ekukhupheni imali, inkampani yamkela amakhadi etyala kunye neebhanki, ii-e-wallets, kunye nokudluliselwa kwebhanki. Njengokufaka kwiidiphozithi, inkampani yamkela kuphela imali kwi-euro, i-USD, kunye ne-sterling. Imali ithatha usuku olunye olusebenzayo ukucacisa.
Ukufaka kunye nokurhoxisa, kuya kufuneka uye kwi-akhawunti yakho yedashboard, ukhethe inkqubo oyifunayo, emva koko ulandele inkqubo.
I-ATFX iphantsi kwe- ummiselo kunye nolawulo weGunya lokuZiphatha kwezeMali (i-FCA). Lo ngowona mlawuli uphambili e-United Kingdom. Inombolo yayo ye-FCA yi-760555. Inombolo yayo ebhalisiweyo yi-09827091. Njengelizwe kwi-European Union, i-ATFX isebenza ngokuhambelana neMarike kwi-Financial Instruments Directive (MIFID II).
Inkonzo yaBaxumi ye-ATFX
I-ATFX ityale imali eninzi kwinkonzo yabathengi. Kwiwebhusayithi, abathengi banokusebenzisa incoko ukunxibelelana nenkampani. Banokutsala umnxeba besebenzisa i-hotline yeenkonzo zabathengi (0800 279 6219 okanye + 44 203 957 7777). Banokuthumela ii-imeyile.
I-ATFX ithelekisa njani nabanye abaRhwebi
I-ATFX iyafana nabanye abathengisi. Inika iqonga le-MT4 elibonelelwa ngamanye amaninzi. Inendawo yokuhlalutya yentengiso, njengabanye abarhwebi. Ikwanekhalenda yezoqoqosho njengabanye abarhwebi. Inkonzo yabathengi kunye notsalo lwemali kunye needipozithi zikwakhona ngokufanayo noko kubonelelwa ngabanye abarhwebi.
Ngaba i-ATFX yiBroker ekhuselekileyo?
I-ATFX ngumrhwebi okhuselekileyo. Iphantsi kweliso le-FCA, engomnye wabalawuli abanzima kwihlabathi. Yinkampani ephumelele inani le Mabhaso kwaye uxhase inani le imicimbi yezemidlalo. Inkampani ikwabonelela ngokusasazeka okukhulu, okunokunceda abathengisi ukugcina imali eninzi.
Iidipozithi zebhanki ngokuthe ngqo,